Ukuqapha Ukuhlinzeka Ngokubambisana - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
(1) i-shaft futhi ibhekene nokuzungeza kanye nokubonakala komuthi okumele ulandele ukuhambisana nezidingo ezifanele zokuphatha.
(2) ukubalwa okuqondile kwezindandatho ezijikelezayo kuhlangene nokuphazanyiswa, futhi kuhlanganisa nokubopha okuqondile kokulinganisa okunembile kwendandatho ehleliwe.
Izindandatho ezishintshayo zokuphazamiseka okuvuthayo lapho kunokwenzeka kufanele zenziwe ezincane. Uma nje ukushisa okusebenza kahle kwemiphumela yokunwebeka okushisayo, kanye nesivinini esiphezulu ngaphansi kwethonya lamandla we-centrifugal, ngeke kubangele ukuhamba okulingana okunamandla noma ukushelela phezulu. Ukulungisa indandatho ngokusekelwe komthwalo wokusebenza nokulinganisa, khetha ukhetho oluncane noma ukuphazamiseka kokungenelela, okukhululekile noma okunamandla kakhulu akusizikhombisi ukubunjwa okuqondile.
(3) isebenza ngezimo ezinjubane eziphezulu nokushisa okukhulu okusebenzayo, kufanele ikhokhele ngokukhethekile ukubopha kwendandatho engavamile kakhulu, ukuvimbela ukudlidliza okunamandla, kanye nekhalo lokulungisa elihlangene nekhokho, ukuze kuvinjelwe ukudlidliza ringanisa ukuphazamiseka ngaphansi komthwalo nokuzijabulisa.
(4) ezimweni zokuphazanyiswa kwezindandatho ezinamathelwana zihambisana nezihlalo zombili zinezinga eliphakeme kakhulu lokuma kanye nokugqwala okuncane, ngaphandle kwalokho ukufakwa kobunzima kokubhujiswa kunzima kakhulu, futhi ngaphezu kwalokho, udinga ukucabangela ithonya le-spongle elongation elishisayo.
(5) usebenzisa i-spindle ibhola le-duplex ene-angular contact bearing, ukukhanya kwe-light, ukuphazamiseka kwabo okufana nokukhulu, ukungena kwe-axial yangaphakathi kuyoba mkhulu kakhulu, okwenza kube nemiphumela emibi. Ukusebenzisa ama-roller roller cylindrical bearings we-spindle ne-spindle I-taper roller bearing, umthwalo wayo ukhulu kakhulu, ngakho ukuphazamiseka kwabo kukhulu kakhulu.